ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာ-ဂျပန် ဂီတပွဲတော်သို့ တက်ရောက် အားပေး - Yangon Media Group
မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား နိုင်ငံတော်သံစုံတီးဝိုင်းက ဂီတပညာရှင်တွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ဂီတပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ မြန်မာ-ဂျပန် ဂီတပွဲတော်ကို နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂) (MICC-2)မှာ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက် ညနေက ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။
အဲဒီပွဲတော်ကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် အားပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာ-ဂျပန် ဂီတပွဲတော်ကို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတို့ရဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းတွေ တီးခတ်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဂျပန်ဂီတမှူး မစ္စတာယူနိုဆူကဲယာမာမိုတိုနဲ့ နိုင်ငံတော် သံစုံတီးဝိုင်းအဖွဲ့တို့က တေးသွားတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက် နိုင်ငံတော်သံစုံတီးဝိုင်းက ဂီတပညာရှင်တွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ဂီတပညာရှင်တွေနဲ့ ဂီတမိတ်အဖွဲ့က အနုပညာရှင်တွေဟာ မြန်မာ-ဂျပန် ရိုးရာတေးသွားတွေကို တီးခတ်သီဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂီတပွဲတော်မှာ ဂျပန်အစိုးရက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကိုးသောင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ ဂီတတူရိယာပစ္စည်း(၁၉)မျိုး လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama က မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ထွေးထံ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂီတပွဲတော်ကြီးကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန် သံရုံး၊ ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့က ပူးပေါင်းတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာ - ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး (ဒလ) တံတား ပိုင်တိုင်မိုင်တိုင်ပြား ၂၂ ခု ဖျက်ဆီးခံရမှု နိုင်ငံ??